Dawladda Puntland oo si kulul uga hadalashay weerarkii lagu laayey 5 nin oo Bakistaaniyiin Tabliiq ah ahaa, oo saakay lagu laayey Galkacyo. [Akhris …] – Radio Daljir
Dawladda Puntland oo si kulul uga hadalashay weerarkii lagu laayey 5 nin oo Bakistaaniyiin Tabliiq ah ahaa, oo saakay lagu laayey Galkacyo. [Akhris …]
Galkacyo, Aug 12- Dawladda Puntland ayaa si kulul uga hadashay dhacdo weerar oo saakay waabarigii lagu laayey wadaado Tabliiq ah oo u dhashay dalka Pakistan, weerarkaasi oo ka dhacay Masaajid ku yaalla Xaafadda Wadajir ee magaalada Galkacyo.
Wadaadada la laayey ayaa tiradoodu gaarayso illaa 5 nin Pakistaaniyiin ah, halka saddex kale oo mid Soomaali yahayna la dhaawacay waxaana dawladda Puntland arrintaasi ku tilmaantay in ay tahay fal naxdin leh oo si weyn looga xumaado.
War qoraal ah oo isla saakay ka soo baxay madaxtooyada Puntland, ayaa si kulul loogu canbaareeyey dhacdadaasi, waxaana madaxda dawladda Puntland ay tacsi tiiraanyo huwan u direen dawladda Pakistan iyo shacabkeeda oo ay uga tacsiyeeyeen weerarka foosha xumaa ee lagu laayey wadaadada Tabliiqa ah ee u dhashay wadankaas.
Qoraalka dawladda Puntland ay maanta ka soo saartay dhacdadaasi waxaa lagu xusay halka falkaasi ka dhacay in ay tahay meel uusan xukun maamulka Puntland.
M/weynaha dawladda Puntland Dr. C/rixmaan Maxamed Maxamuud ?Faroole? oo qoraalkaasi kadib ka hadlay xaflad xarigga looga jarayey dhisme cusub oo ay yeelanayso wasaaradda haweenka iyo arrimaha qooyska ee Puntland, ayaa sheegay dhacdadaani in ay ka carraysiisay dhammaan dadka muslimka ah iyana ay la qabaan murugadaasi.
M/weynuhu waxaa uu sheegay falkaani in uu ka dhacay meel ka baxsan meelaha maamulka Puntland uu ka arrimiyo, oo ay meeshu tahay dhanka maamulka Gal-Mudug, laakiin wuxuu tilmaamay in ay lagama maar-maantahay in la iska kaashado sidii caddaalada loo hor keeni lahaa raggii falkaasi gaystay.
M/weynuhu waxaa mas?uuliyiinta maamulka Gal-Mudug ka codsaday in ay awoodda saaran soo qabashada raggaasi falka gaystay, wuxuuna sheegay ciidanka ammanka Puntland in ay arrintaasi gacan ku siinayaan.
Md. Faroole, wuxuu sheegay wadaadada la laayey ee Tabliiqa ahi in ay ahaayeen kuwo masaakiin ah oo markasta u taagan fidinta Dacwada islaamka, laguna yaqaano in ay ka madax-bannaanaayeen is qab-qabsiga diineed ee dunida ka jira.
Dhanka kale m/weynuhu waxaa oo shacabka magaalada Galkacyo ka codsaday in ay si dhab ah ammaanka uga shaqeeyaan gacan buuxdana ay siiyaan ciidanka ammaanka si looga hor tago falkasta oo liddi ku ah nabad-galyada gobolka.
Hadalka dawladda Puntland ayaa yimid kadib markii waabarigii hore ee saakay masaajid ku yaalla xaafadda Wadajir lagu laayey wadaado Tabliiq ah oo tiradoodu gaarayso 5 nin halka isla dhacadaasna lagu dhaawacay 3 kale oo mid ahaa Soomaali Masajidka ku tukanayey, waxaana isla weerarkaasi ka bad-baadi saddex Pakistaaniyiin ah oo xilligii weerarku bilowday ku maqnaa Xamaam lagu qubaysto.
Wadaadada ayaa lagala soo baxay Masajidka waxaana lagu laayey meel bannaankiisa ah, waxaana isl markiiba baxsaday raggii weerarkaasi gaystay iyagoo u jahaystay dhanka koonfureed ee magaalada, waxaana dad goob joogayaal ahi Daljir u sheegeen tiradoodu in ay gaaraysay illaa 10 nin kuwaasi oo aad u hubaysnaa.
Wadaadada la laayey ayaa magaalada Galkacyo soo gaaray maalintii shalay ahayd waxayna u socdeen fidinta Dacwada islaamka sida ay idaacadda Daljir u sheegeen saraakiisha garoonka diyaaraha ee magaalada Galkacyo oo baaritaan iyo hubin ku samaayey xilligii ay soo dagayeen.
Warar is khilaafsan ayaa ka soo baxaya halka uu ka dhici doono aaska wadaadada la laayey, waxaana wararka qaar sheegayaan in lagu xabaali doono Qabuuraha magaalada Galkacyo, halka warar kalana ay tilmaamayaan in Maydkooda loo dhoofin doona dalka Paksitan.
Waa markii ugu horraysay oo dhacdo noocaan oo kale ah ay ka dhaco masaajid ku yaalla Soomaaliya, waxaana arrintaasi ay naxdin iyo walwal badan ku abuurtay dhammaan bulashada qaybaheeda kala duwan.